बिचौलियाको हातमा कलंकी मालपोत: गेटदेखि भित्रैसम्म सिन्डिकेट(भिडियोसहित) - TV Annapurna
बुधवार ! मालपोत कार्यालय कलङ्की ! कार्यालयको गेटमा पुग्ने बित्तिकै । हेलो ! के कामको लागि हो ? आउनुस्, म मिलाएर गराइदिन्छु । दुई जनाले रिर्पाेटिङका लागि पुगेका टिभी अन्नपूर्णको टिमलाई भने । गेटबाटै मालपोतमा सिन्डिकेट । त्यहीबाट सुरु हुन्छ सेवाग्राही ठग्ने क्रम । कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको सिन्डिकेट । त्यही भेटिए एक सेवाग्राही । सहकारीबाट ऋण लिनको लागि जग्गा रोक्का गर्न गएका । अघि म मिलाइदिन्छु भन्ने पनि त्यही थिए । सेवाग्राहीले आठ लाख ऋण लिनु पर्ने भन्न नपाउँदै उनले भने । मालपोतमा काम गर्न गाह्रो छ । उनले थपे । भित्र मिलाउनु पर्छ । दुई हजार जति भित्र खर्च हुन्छ ।
दुई हजार लेखापढीको । खै कागज पत्र ? ल्याउनुस् म हेर्छु । उनले सोधे। खासमा पैसा लाग्ने त दुई सय राजश्व मात्रै हो । उनी आफैले भने । तपाईँ सिधै जानु भो भने महिनौँ पनि लाग्छ । पाँच सय कमै दिनुस् । लेखेरै राख्नुस् तपाइको फाइल यता उति गर्दै हप्ता लाग्छ । काम त महिना पनि लाग्न सक्छ । तपाइले दिएको ४ हजार कहाँ मैले मात्रै खाने हो र ?
कम्प्युटरको कर्मचारीले पाँच सय लिन्छ । नभए काम गर्दैनन् । बाँकी रकम चाहिँ सबै कर्मचारीहरू मिलेर बाँड्छन् । उनले दिउँसो अख्तियारको कर्मचारी छड्केमा आउने हुँदा बेलुका मात्रै बाँडफाँड गर्ने गरेको पनि खुलासा गरे ।
त्यो भन्दा कम मा त सकिन्न । भन्दै उनी अर्को मान्छे तिर गए । सेवाग्राहीसहित हामी कार्यालय भित्र प्रवेश गर्‍यौँ ।
सेवाग्राही भन्दा विचौलिया बढी
कार्यालयमा मान्छेको भिड । मोठ रोक्का तथा कम्प्युटर शाखामा मान्छेको घुइँचो । विचौलियाहरु दराजबाट ढड्डा निकाल्दै । हातहातमा फाइल । को सेवाग्राही को कर्मचारी छुट्ट्याउनै गाह्रो ।
एक जनाले कर्मचारीको हाजिरीमाथि फाइल राखेर लेखापढी गर्दै थिए । उनी कर्मचारी होइनन् । बिचौलिया थिए । कर्मचारी त मुख दर्शक । कार्यालय सहयोगी भन्दै थिए ।
यस्तो त सधैँ हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी भन्दा बिचौलियाले बढी दौडधुप गर्छन् । काम पनि उनीहरूले नै बढी गर्छन्, उनको जिकिर थियो । यसरी काम गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने । मिल्ने नमिल्ने थाहा छैन काम चाहिँ सधैँ गर्छन् । त्यही प्रश्नमा लेखापढी व्यवसायीको भने फरक जवाफ थियो । उनी भन्दै थिए । कामै गर्न नपाउने भन्ने त होइन होला नि ? अलि कड्किएर भने । त्यत्तिकैमा अर्की महिला बाहिरिन हतार हतार । उनी पनि बिचौलिया नै थिइन् । एक जना सेवाग्राहीले भने । वहाँ मेडम भए पछि एकै छिनमा काम हुन्छ । मान्छे पनि साह्रै हल्का ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख देवी बहादुर भण्डारीको भने ओठे जवाफ थियो । उनले गैर जिम्मेवार हुँदै भने सुधार्ने प्रयास त गरेको हो । बिचौलिया भन्दा कर्मचारी बदमास छन् । मान्दै मान्दैनन् । अब देखि बिचैलिया प्रवेश गर्न दिन्न ।
राज्यले मालपोतमा बिचौलियाको चलखेल बढेको भन्दै उनीहरूलाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । सर्वसाधारणले सजिलै फारम भरेर घरजग्गा पास गर्ने संयन्त्र तयार पारेको सरकारी निकायको जिकिर छ । तर कार्यालयको अवस्था भने खासै फेरिएको छैन ।
पैसा नभएसम्म मालपोतका कर्मचारी हल्लँदैनन् भन्ने गुनासो बारम्बार आइरहन्छन् । एउटै फाइल महिनौँसम्म अड्काएका थुप्रै समाचार आउँछन् ।
अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार धेरैजसो घुस लिने काम नापी तथा मालपोत कार्यालयमा हुन्छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा विभिन्न बहानामा घुस लिने, ढिलासुस्ती गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दा नापी र मालपोत कार्यालय नै खाली हुने अवस्था आउन सक्ने अख्तियारले जनाएको छ । एउटै घुसकाण्डमा ८० जना सम्म कर्मचारी सामेल भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।